Yenza iFektri yokuseta iBlackBerry Playbook yakho
Yima, linda, kwaye ucinge: ukuba wenze konke ekufuneka ukwenzile (kubandakanya ukubiza uPhando ngeMoto ngengcebiso yabo), kungafuneka usule inkumbulo yakho yeBlackBerry Playbook. Cinga ngoHal ocula iDaisy, iDaisy, ndinike impendulo yakho uyenze kwifilimu 2001 njengoko ingqondo yekhompyuter ye-anthropomorphic yayicinyiwe kancinci.
UKUYA sula, okanye a ukuphindisela kwisetingi sefetri, iya kubuyisela iBlackBerry Playbook yakho ngendlela eyayiyiyo xa wawuyifumana okokuqala: inkqubo yokusebenza kunye noseto oluqhelekileyo lweeapps kodwa ayikho enye into. Ukuseta umzi-mveliso kususa iiapps ozikhuphelileyo, naziphi na iifoto okanye iividiyo ozithathile okanye ozigqithisileyo ususa kwenye ifowuni, kunye nolunye ulungiso lwesimo osenzileyo
Uya kulahla ukubhaliswa kwe-Playbook yakho kwi-ID yeBlackBerry; Kuya kufuneka uphinde ufake loo ID ukuze uqhagamshele kumama uhlaziyo, inkxaso, kunye nokukhuphela usetyenziso.
isetyenziselwa ntoni icefdinir
Ukuba kunokwenzeka, sebenzisa iMenenja yeDesktop yeBlackBerry kwiPC yakho ngokunxibelelana neBlackBerry Playbook yakho kwaye wenze ugcino olupheleleyo lwemixholo yethebhulethi yakho kwifolda ekwikhompyuter yakho eyeyakho neyelaptop.
Oku kuyakuvumela ukuba uphinde ufake ii -apps kunye nedatha kwithebhulethi emva kokuseta kwakhona kwefektri Ukuba ukrokrela ukuba enye yeapps zakho ingumthombo wengxaki, faka usetyenziso lwakho ngokukhetha; vavanya i-Playbook emva kokuba nganye ikho ukuze ubone ukuba i-Playbook isasebenza kakuhle na.
Umthamo we-fluoxetine 60 mg
Ulunyukisiwe okungenani kabini. Kwaye ukuba ukhe wazama ukwenza lo myalelo kwiscreen seBlackBerry Playbook yakho uya kulumkiswa kwakhona. Nantsi indlela yokwenza ukuseta kwakhona kumzi-mveliso:
Ukusuka kwiphepha lasekhaya, swayipha ezantsi ukusuka kwi-bezel ephezulu.
Isimo sekrini siyavula.
Cinezela i icon yegiya kwikona ephezulu ngasekunene.
Thepha ukhuseleko kwiphaneli yasekhohlo.
Kwiskrini soKhuseleko, cofa icandelo loKhuseleko.
Uza kubona isikrini sokulumkisa.
Ukuba ukulungele ngokwenene ukuqhubeka, cofa kwibhokisi yokungena.
Ikhibhodi yescreen iyavela.
Faka iphasiwedi eyimfihlo enkulu: i-blackberry.
Iphasiwedi yokuqinisekisa ukuSula koKhuseleko ligama elilula iblackberry . Yigama elifanayo kwi-tablet nganye yeBlackBerry Playbook. Esi sizathu esikhulu sokubeka igama eligqithisiweyo kwi-Playbook yakho; Ngaphandle koko nabani na wayenokuyithatha ithebhulethi yakhe kwaye asule ingqondo yayo.
Ukuba ulungile, thepha Sula idatha.
idosi eqhelekileyo ye-lisinopril
Iziphumo ebezingalindelekanga ze-mesalamine ixesha elide
amayeza kakhulu sifo
zofran idosi yabantwana
yintoni ipilisi m365